Gaaddisa Hoggansa Oromoo: Dhaabbileen siyaasaa Oromoo hunduu dantaa Oromoof gaaddisa tokko jalatti waliin hojjechuuf waliigalan - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Firaafoli Dhugasa
Jarmiyaaleen siyaasaa Naannoo Oromiyaa keessa socho'an waliin hojjachuuf waliigaltee waliin mallatteessan.
Ibsa waliigaltee Gaaddisa Hoggansa Oromoo Obbo Jawaar Mohaammadiin dubbifameen, hoggantoonni dhaabbileen siyaasaa Oromoo ji'a shaniif walitti aansuun marii taasisaa turan waliigalteen xumuran.
Hoggantoonni dhaabbilee Siyaasaa Oromoo ibsa ejjennoo waloo kana mallatteessan kanarratti kanneen argaman keessaa Obbo Lammaa Magarsaa, Obbo Daawud Ibsaa, Dr. Mararaa Guddinaa, B/J Kamaal Galchuu, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Galaasaa Dilboo, Obbo Jaarraa Abbaa Nagaafi kanneen biroo ni jiru.
'Dhimmi Getaachoo Asaffaa dafee furamuu baannaan biyyaaf yaaddoodha'
Wal qoccoluun paartilee ADWUI biyyattii garam geessa?
Imalli cehumsaa Itoophiyaa eessa gahe?
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahmad sirna walmallatteessuu walgaltee Gaaddisa Hoggansa Oromoo kanarratti argamanii dubbii dubbataniin siyaasa Oromoo ammayyeessuu qabna jedhan.
"Siyaasa wal haddheessuufi walmadeessuu keessaa baanee akka jaarraa 21ffaaf ta'utti waliigallee hojjechuu qabna" jedhan, Dr. Abiy.
Ibsa dubbifame kun mariin kun seenaa akka dhaabbata siyaasaafi akka Oromootti keessa daban wal yaadachiisuu dabalata. Akkasumas haala har'a jiru jalatti ummatichi carraa akkamii akka qabu wal kan ittiin hubachiisan jedhameera.
"Dabalees balaan ummata keenyarratti yeroo ammaa duumessaa'ee jiru ilaallee jirra. Waan hundumaa caalaa dantaa ummata Oromoorratti ejjennoo waloo irra geenyeefi safuufi laguu jaarmayaalee siyaasaa Oromoo hariiraa waliin qabatanirratti ittiin masakamuu qabanirratti walta'insarra ga'uu keenya mallattoo keenyaan mirkaneessinee jiirra," jedha ibsi Obbo Jawaar dubbisan kun.
Marii isaanii kanaan qabxiileen ijoo irratti waliigalan keessaa:
Hojii qabsoorratti ammaan booda qindoominaan akka hojjechuu dandeenyu Gaaddisa Hoggansa Oromoo hundeessinee jirra. Waldhabbiifi mufii Gaaddisa Hoggansaa kana jala fiduun furuudhaan hokkarriifi hololli dhalachuu dhowwina.
Waan hundaafuu nageenyi murteessaa ta'uu hubachuudhaan nageenya Oromoofi Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee waldhabbiiniifi waraanni lubbuu ilmaan Oromoo fudhachaa jiru akka atattamaan dhaabbatu dhimmoota dubbichi ilaallatu hunda ni gaafanna, waliinis irratti ni hojjenna. Filmaanni dhufu hundaafuu ifaafi bilisaan akka gaggeeffamu taasisuurratti waliin hojjenna.
Haala filannichi Oromiyaa keessatti gaggeeffamurratti mariidhaan murtiirra ni geenya.
Dhumarratti Irreecha waggoota 150 Hora Finfinneerratti kabajnu kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu ummanni keenya nagaa, jaalalaafi tokkummaatiin akka kabajatu hawwina. Gadaan Gadaa Misoomaati!
Hoggantoonni dhaabbilee Siyaasaa Oromoo ibsa ejjennoo waloo kanarratti argamanii mallatteessan keessaa Obbo Lammaa Magarsaa, Obbo Daawud Ibsaa, Dr. Mararaa Guddinaa, B/J Kamaal Galchuu, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Galaasaa Dilboo, Obbo Jaarraa Abbaa Nagaa ni argamu.
Paartilee Siyaasaa: Dhimmi Obbo Getaachoo Asaffaa dafee furamuu baannaan biyyaaf yaaddoodha
MM Abiy Ahimad: Imalli cehumsaa Itoophiyaa eessa gahe?
29 Bitooteessa 2019
Lammaa Magarsaa, Shimallis Abdiisaa: Jijjiirraa kaabinootaafi dhiibbaa siyaasaa
'Waraanni mootummaan WBO fakkeessee bobbaase guute'
'Dantaa ummataa kabachiifna jechaa hattuu bilisa baasuun qaaniidha'
Sodaa koronaavaayirasiin Sa'udiin imala Makkaa fi Madiinaa dhorkite
Meeshaan ofiin beeyladoota sooru hojii dhaabnaan baayladoonni beela'an
Dubartiin Naayijeeriyaa akkamiin dhiira lamatti heerumte?
Konkolaachisaa daandii Finfinnee irratti waa'ee nagaa lallabu
Dureen mana amantaa Kaatolikii Itoophiyaa Eertiraa seenuu dhorkaman
Shamarran 'dhimma hin qabnetu' gudeedama jechuun yunivarsiitii dheekkamsa kaase
Itoophiyaan marii Hidha Haaromsaa Waashingitan irratti akka hin hirmaanne beeksifte